Ifulethi lesimanjemanje eli-1 elizimele eCleveland
Cleveland, Queensland, i-Australia
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Siggy
U-Siggy Ungumbungazi ovelele
Itholakala eCleveland, igumbi lethu lokulala elilodwa elizimele linazo zonke izinsiza ezidingekayo ukuze uhlale ngaphandle kwengcindezi. Ikhishi, indawo yokuphumula, ibhentshi lesiqhingi sokudlela, umbhede wendlovukazi othokomele, indawo yokugcina eyanele eyakhelwe ngaphakathi, igumbi lokugezela elivulekile elinomshini wokuwasha, ishawa enkulu, indawo yokupaka yamahhala, ivulandi - AKUKHO IZITEZI. Ukuhamba ibanga ukuya enxanxatheleni yezitolo/izindawo zokudlela ezinkulu. Indawo yokuhlala enokuthula, ilungele izithandani ezifuna ukuthula nokuthula. Imigwaqo ebanzi yokuhamba ngezinyawo nokugibela ibhayisikili. Izinto eziningi ezikhangayo/ozozenza eMoreton Bay.
Igumbi elilodwa lokulala elinombhede wendlovukazi othokomele kakhulu. Ikhishi elifakiwe eligcwele linazo zonke izinsiza ezingaba khona ezihlanganisa i-cooktop, i-oven, i-microwave, ifriji yeminyango emi-2 kanye nezinto zikagesi eziningi. Indawo eningi yokugcina. Ifanele umbhangqwana ofuna nje indawo ethule yokuphumula ubusuku obubodwa noma obubili noma ngaphezulu, uzimisele ukuchitha isikhathi uhlola izinto eziningi ezikhangayo indawo yangakithi engazinikeza nokusebenzisa leli fulethi njengesizinda sasekhaya. Kukhona indawo yokudlela kanye negumbi lokuphumula eline-TV - okuhlanganisa nezinsiza zokubhalisela. Isivinini esiphezulu esingu-100mps i-broadband engenamkhawulo. Igumbi lokugezela lineshawa enkulu kanye nomshini wokuwasha. Ivulandi elincane elingaphandle ukuze uphuze ikhofi lapho kupholile kusihlwa noma ekuseni. Ukufinyelela okuvulekile kwesihlalo sabakhubazekile egumbini ngalinye (okunye ukufinyelela okuphansi uma kufakwe isicelo). Indawo ethule yedolobha enemigwaqo ebanzi kakhulu nezihlahla ezinkulu ezinomthunzi. Abalandeli abazilawulayo abane-aircon emaphakathi uma izimo zibacindezela. Kulabo abafuna i-ambience ethule phakathi kwendawo ezungezile ejabulisa kakhulu - asikho isidingo sokwabelana nganoma yini futhi nakanjani awekho amakheshi noma izitebhisi zokuzulazula. Indawo yokupaka yangasese ngaphandle nje kwefulethi - enokuqapha kwekhamera. Ngaphakathi kwebanga lokuhamba kuzo zonke izinsiza kubandakanya izitolo ezahlukahlukene, igrosa nezindawo zokudlela.
4.96 ·200 okushiwo abanye
I-Cleveland iyindawo yobuhle bemvelo. Indlu yethu iqhelelene neMoreton Bay neziqhingi eziningi ezikhangayo - njengeSt Helena, iStradbroke neMoreton. Lezi ziqhingi zesihlabathi zifinyeleleka ngezikebhe nezikebhe zokuvakasha ezingaqashwa kuma-marina amaningi endawo. Izingxenye zendawo engaselugwini ezungeze iCleveland ziqokwe njengezindawo ezingamaxhaphozi ezingavamile noma eziyingqayizivele lapho izinhlanzi nezitshalo zasemanzini nezilwane zichuma khona. Isimo se-RAMSAR - Ingqungquthela Yezindawo Ezimanzi Zokubalulekile Kwamazwe Ngamazwe - sithathwa njengesibalulekile ekulondolozeni izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo. Zimbalwa kuphela izindawo ezinjengalezi emhlabeni.
Buqamama kuneFraser Island, esenyakatho yeBrisbane - isiqhingi esinesihlabathi esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Kanye nemidlalo yasemanzini esebenzayo efana ne-kayaking kanye nokuhamba ngomkhumbi kukhona futhi i-maze yamabhayisikili nezindlela zokuhamba ukuze uhlale umatasatasa - kulabo abafuna ukuzivocavoca okwengeziwe noma ukuhambahamba nje kokuvilapha noma kusihlwa eduze nolwandle. Eningizimu, phansi kakhulu ogwini, singaziqhayisa ngamanye amabhishi ahamba phambili e-Australia (nasemhlabeni). Ukubuka imikhomo futhi kuyintandokazi yesikhathi esedlule kusukela ngasekupheleni kukaJulayi kuya ekuqaleni kuka-Okthoba (sukuma futhi ube ngokwakho esikebheni sokuvakasha). I-Gold Coast idume "ngemihlaba" eminingi ethokozisayo edonsa imindeni kanye nabasha enhliziyweni ukuthi bajabulele ukugibela emanzini, emoyeni noma ezindaweni zokulingisa. Kuningi ongakhetha kukho - WaterWorld, WetNwild, Seaworld, MovieWorld ukusho izithandani. Bhukha ku-inthanethi ngaphambi kokuthi ufike lapho.
Bheka Vakashela i-Redlands Coast ku-Google.
Ezinye ezikhangayo zasendaweni zifaka:
* Isiqhingi saseStradbroke 'iStraddie' - Bamba isikebhe uwele ukuze uvakashele isiqhingi sesihlabathi sesibili ngobukhulu emhlabeni. Bona amabhishi ahlanzekile, amanzi olwandle acwebile nemvelo, namachibi anamanzi ahlanzekile.
* I-Sirromet Winery -Isampula lewayini elisuka emnyango wegumbi elingaphansi noma phumula futhi unambitha ukudla kwasendaweni.
*I-Raby Bay Marina - Idla isidlo sasekuseni, isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa kwenye yezindawo zokudlela eziningi ezisethekwini
* I-Redlands Track Park- 25kms wemizila yokuhamba ehlathini, ukuhamba ngebhayisikili, ukugibela amahhashi, ukugijima umzila kanye nokubona izilwane zasendle.
* IVenman Bushland National Park: Hamba ehlathini ukuze ubone ama-koala, ama-wallabies nezinye izilwane zasendle zomdabu.
* I-Redlands IndigiScapes Centre: Hlola i-bushland, funda ngabantu bendawo bendabuko noma ujabulele ukunambitheka kwe-tucker yasehlathini yase-Australia endaweni yokudlela.
* Ukubuka imikhomo: Buka ukufuduka komkhomo usuka endaweni ephephile ogwini noma ubhukhe uhambo lolwandle.
* Imidlalo yasemanzini: Ukuhamba ngesikebhe, i-kayaking, ukudoba, ukugibela ama-paddle boarding, ukubhukuda
Bheka Vakashela i-Brisbane ku-Google.
Izindawo zokuhlala ezengeziwe e-Brisbane City:
Idolobha laseBrisbane likufanele ukuvakashelwa. Ikalwe njengelinye lamadolobha ahlala emhlabeni. I-Southbank, i-Mt Cootha, i-Botanical Gardens kanye nokugibela isikebhe noma ukuhamba ngesikebhe ukhuphuka uphinde wehle ngoMfula i-Brisbane udlule i-CBD ebabazekayo e-CityCat kufanele kube uhambo lwanoma ubani. Kulezo ezijabulisayo zama i-Story Bridge Climb.
Uma unentshisekelo ngempilo yasendle ungaphuthelwa yi-Lone Pine Koala Sanctuary.
Izindawo zokuhlala ezengeziwe e-Redlands and Brisbane:
Isitimela: uhambo lwemizuzu eyi-10 ukuya esiteshini sesitimela sendawo; izitimela zigijima ngqo eBrisbane.
Imoto: imizuzu engama-45 ukuya eBrisbane City Centre; Imizuzu engama-40 ukuya esikhumulweni sezindiza saseBrisbane; Imizuzu engama-45 ukuya eGold Coast.
Ibhayisikili: Imigwaqo yabagibeli nangaphandle komgwaqo kanye nezindlela zamabhayisikili zokungcebeleka.
Hamba: Ziningi izindlela zokuhamba zasendaweni.
Ngenxa yokuthi sinolwandle, isihlabathi, ihlathi nezintaba nxazonke kunemisebenzi eminingi yokuzijabulisa ehlukahlukene ongakhetha kuyo ehlanganisa ukusefa, ukubhukuda, ukutshuza, ukugibela izikebhe, ukushayela ngamasondo angu-4, ukuhamba ehlathini noma ukuzulazula nje futhi ujabulele isimo sezulu esipholile. Zama phakathi nezwe ukuze ubone amapaki ethu emvelo kuyo yonke inkazimulo yawo emangalisayo.
Kunezindawo zokudlela eziningi zasendaweni ongakhetha kuzo kanye nezindawo eziningi ongajabulela kuzo ipikiniki ikakhulukazi ezindaweni ezihlukahlukene zomhlaba eziphumela ethekwini eliseduze kakhulu nendawo yethu - Cleveland Point, Wellington Point, Victoria Point njll. Uhambo lokuya eSt. I-Helena Island nendlu yayo yokujezisa ethokozisayo kodwa engcolile iwukugqama kwangempela - abalingisi balingisa indlela indawo esebenze ngayo osukwini lwayo lokuduma.
Isimo sezulu singashisa kakhulu futhi sibe nomswakama ehlobo (28-35 degrees emini) kuyilapho ubusika buba mnene. Amazinga okushisa ebusika emini angama-21-25 degrees ajwayelekile. Iningi lemvula yethu lina ehlobo, nokho, ngenxa yezinga lokushisa elifudumele, usuku lwemvula lungaba mnandi kakhulu.
Ifulethi lethu lisebenzisa ilanga ebusika futhi linomoya omuhle ehlobo. Lokhu kusisiza ukuthi sihlale sipholile ehlobo kodwa kukhona namafeni egumbini ngalinye kanye nesiphephetha-moya esimaphakathi uma izinga lokushisa licindezela kakhulu.
Hamba umazi wemigwaqo ebanzi ethule noma ulandele ugu eduze kwezindlela ezinhle zokuhamba/zokuhamba ngebhayisikili, hlala noma ujabulele ukuzola nge-BBQ, ipikiniki, ikhofi noma i-nibbles kwenye yezindawo zokudlela eziningi ezibheke onqenqemeni lwamanzi. Jabulela izimakethe zangeSonto noma isitolo samafasitela ukuze uthole okuqukethwe yinhliziyo yakho ezitolo eziningi ezikhethekile nje uhamba imizuzu emi-5. Gibela isitimela noma ibhasi esiphithiphithini saseBrisbane esiphithizelayo noma uqhelelene nezivakashi eGold Coast noma ugibele isikebhe sasendaweni uye esiqhingini saseSouth Stradbroke esinamabhishi aso okuseza kanye namakhona athule. UCleveland unakho konke.
We are a semi retired couple in our early seventies. We were originally secondary teachers and have worked for many years in technology related fields. We love living in Cleveland and enjoy our grandkids, the outdoors, photography, bike riding, reading, traveling and meeting people. Our newly built house has been specifically designed with a self contained area to give us flexibility in later life. In the meantime it gives us a chance to host travellers. We know that every day above ground is a bonus because you are a long time dead.
We are a semi retired couple in our early seventies. We were originally secondary teachers and have worked for many years in technology related fields. We love living in Cleveland…
Ifulethi/ifulethi lihluke ngokuphelele nendawo yalo yokungena, livalekile ngokuphelele emsindweni futhi liziphethe ngokwalo ukuze izihambeli zingalokothi ziphazamiseke. Asikho isidingo sokwabelana nganoma yini (ngaphandle kwe-air conditioning emaphakathi). Ifulethi lakhiwe inhloso ukubhekelela umbhangqwana ozihlalela ngokuzimela. Usizo luhlala lukhona - sithumelele i-SMS noma shaya insimbi yokuncencethwa emnyango yevidiyo. Ngaphakathi kwebhukwana lendlu kukhona ifolda yamamephu namanothi athakazelisayo mayelana nezinto ezihehayo nezinto okumele zenziwe endaweni. Kukhona izindawo zokudlela ezanele nezindawo zokudlela ezihamba phakathi kwemizuzu emi-5 kanye nokukhethwa okubanzi ngokwengeziwe ngasogwini. Iningi lezivakashi zethu likhetha ukusebenzisa ikhishi nawo wonke ama-mod cons alo ukupheka nokujabulela ukudla. Isikhungo sokuthenga se-strip sibanzi ngegrosa nezitolo ezikhethekile kanye nezinsizakalo ezifana nodokotela bamazinyo, odokotela, usokhemisi, iziteshi zikaphethiloli - noma yini ongayidinga. Sicele izincomo noma ubhekisele kumanuwali wemibono yendlu yethu neyokuhamba/yezikhangayo.
Ifulethi/ifulethi lihluke ngokuphelele nendawo yalo yokungena, livalekile ngokuphelele emsindweni futhi liziphethe ngokwalo ukuze izihambeli zingalokothi ziphazamiseke. Asikho isid…
USiggy Ungumbungazi ovelele